Waa maxay nooca serif iyo goorma ayaa la isticmaalaa? | Hal-abuurka khadka tooska ah
Waa maxay nooca serif iyo goorma ayaa la isticmaalaa?
Maryan Rose | | General
Naqshadayaasha sawirada ayaa ah xirfadlayaal siinaya muhiimad weyn doorashada xarfaha, maadaama ay inta badan tahay saldhigga ugu weyn ee naqshadeynta. Doorashada qaabka saxda ah ee naqshad kasta waxay badanaa kaa caawineysaa inay ka duwanaato naqshadda caadiga ah iyo mid xirfad leh. Qoraalku wuxuu kaloo caawiyaa in la gudbiyo shucuur kala duwan. Waxaa jira qaybo kala duwan oo qoraal ah, kuwa ugu caansan waa: Serif, Sans Serif, Farshaxan iyo Qurxinta.
Kooxaha fartu waxay leeyihiin astaamo kala duwan oo ku salaysan qaabka xarfaha, cabbirka, miisaanka, iyo saamiga xarfaha. Iyada oo ku xidhan farta aad isticmaalayso, waxa aad soo gudbin doontaa dareen ama mid kale. Waa hagaag typography iyo, ka dib oo dhan, waa qaab-dhismeedka dhexe ee naqshadeynta. Qormadan maanta waxa aan ku sharxi doonaa oo aan ku baahin doonaa xarfaha serifka iyo marka ay habboon tahay in la isticmaalo.
1 Waa maxay nooca serif?
2 Qaababka xarfaha Serif
3 Goorta la isticmaalayo serif typeface
Waa maxay nooca serif?
Nooca serifka waa mid leh serif ama terminal, taas oo ah, tafaasiil yar oo ku yaal darafyada xarafka garaaca. Nooca noocaan ah wuxuu leeyahay dabeecad halis ah oo soo jireen ah. Sida asalkeeda, sida laga soo xigtay aragti qadiim ah, marka la isticmaalayo qalabka sida burushyada ama qalimaan, culimadu waxay ka tageen "calaamadaha" dhamaadka istaroog kasta. Muddo ka dib, istaroogyadani waxay noqdeen kuwo farshaxanimo badan waxayna noqdeen qayb lama huraan u ah nooca noocaan ah. Qaabkan waxaa ku jira far kala duwan oo kala duwan sida romankii hore, romanka casriga ah, saabka iyo masar.
Qaar ka mid ah xarfaha serif ee ugu caansan waa: Buugga Antiqua, Courier, Courier New, Buugga Dugsiga Qarniga, Garamond, Georgia, Times, Times New Roman, ama Palatino.
Qaababka xarfaha Serif
Kala soocidda wejiyada serifka waxaa go'aamiyay Francis Thibodeau. Waxay ku salaysnayd xidhiidhka ka dhexeeya serifka iyo qudhaanjada. Isaga oo taas ka duulaya, waxa uu go’aamiyey qaababkan soo socda:
Roomaanki hore: ma jiro wax farqi ah oo u dhexeeya qudhaanjada iyo serifka. Xidhiidhka ay soo bandhigayaan waa mid wareegsan. Joojintiisu waa degdeg, salkeeduna waa ballaadhan yahay. Istaroogyadu way kala duwan yihiin, waana fuulitaan dhuuban iyo kuwo dhumuc weyn leh. Dhanka dhidibka xaggiisa, dhumucdiisu waa damqasho oo booska xarafku aad buu u ballaadhan yahay. Kooxdan waxaa lagu dari karaa: Garamond iyo Caslon.
Roomaanka ku meel gaadhka ah: farqiga u dhexeeya dhumucda geesaha iyo serifka ayaa bilaabay inuu soo baxo, isku xirka ay leeyihiin waa wareeg. Serifku wuxuu leeyahay dhammaad aad uga af badan kuwii hore. Istaroogyadu sidoo kale way kala duwan yihiin, laakiin taa beddelkeeda, faraqa u dhexeeya khafiifka iyo dhumucda ayaa aad u muuqda. Jihada dhidibka dhumucdiisu waa ka sii toosan yahay marka loo eego duleelka. Qaar ka mid ah wejiyada nooca Roomaanka ee kala guurka ah waa; Baskerville, Waqti ama Qarni.
Roman Casriga ah: qaabkan oo kale farqiga u dhexeeya qudhaanjada iyo serifka ayaa ah mid si aad ah loo ogaan karo, iyadoo xidhiidh toos ah la leeyahay mar haddii serifka xarafkiisu uu yahay mid toosan. Istaroogyadu aad ayey uga duwan yihiin marka loo eego xaaladda Roomaanka kala-guurka. Waxaan u tixgelin karnaa sida Roomaaniga casriga ah ee Bodoni, Caxton, Baskerville cusub iyo Didi.
Masri: qiimaha qudhaanjada iyo serifka waa la shiday oo waxay leeyihiin xidhiidh wareeg ah. Serifku wuu dhumuc weyn yahay sida bakoorada oo kale. Iyadoo ku xiran nooca nooca, waxay noqon kartaa labajibbaaran, sida Robotik, ama wareegsan, sida Cooper Black. Jihada dhidibka ee dhumucdiisu badanaa waa jiif.
Goorta la isticmaalayo serif typeface
Waxaa jira adeegsiyo badan oo aad ku siin karto noocyadan xarfaha, waxay kuxirantahay bilicda iyo shaqada aad rabto inaad siiso. Waa hagaag lWajiyada serif-ka ayaa waliba qoraalka ku leh qiimo shaqaynaya, sidaan hore u soo sheegay. waa kuwa ugu habboon qoraallada dheer iyo kuwa yaryar. Waxaan ku arki karnaa inta badan wargeysyada daabacan. Haddii waxa aad rabto ay tahay inaad gudbiso dhaqanka, qadiimiga, xarrago ama darnaanta, xarfaha serif ayaa ah kuwa ugu habboon.
Kuwani waa qaar ka mid ah qodobbada ay tahay inaad ku xisaabtanto markaad dooranayso hal nooc ama mid kale:
Dhererka qoraalka: Sidaan horeyba u soo sheegay, xarfaha serif waxay ku habboon yihiin isticmaalka qoraallada cabbirkoodu yar yahay oo leh qoraal dheer oo dheer. Hubaal haddii aad hadda akhrinayso buug, farta uu ka kooban yahay waa serif.
Dadweynaha: Xarfaha xarfaha waxay gudbiyaan shucuur, markaa dhammaantood maaha kuwo loogu talagalay isla daawadayaasha la beegsanayo. Sida midabku muhiim u yahay, qaabka xarfaha ayaa sidoo kale kaa caawin doona qeexida bartilmaameedkaaga. Guud ahaan, qaabkan xarfaha waxaa loo adeegsadaa shirkado ka culus iyo kuwa rasmi ah, sida qareennada. Inkasta oo sidoo kale loo isticmaalo qaybo aad u casrisan, sida quruxda raaxada, moodada ama noocyada baabuurta.
Taageero: Qaababka aadka loo isticmaalo waa warbaahinta daabacan oo ka kooban qoraallo dhaadheer. Isla sidaas oo kale ayaa ka dhacda warbaahinta internetka sida blogyada ama maqaallada.
Kala: farqiga u dhexeeya jilayaasha sidoo kale waa muhiim, farta aad isku koobtay laguma talin in la akhriyo, waa wax ay tahay inaad ku xisaabtanto.
Qaabka: Iyadoo ku xiran qaabka qoraalada, mararka qaarkood waxaa xiiso leh in la isku daro xarfaha serifka iyo xarfaha san serif, si loo dhaliyo kala duwanaansho iyo in qoraalku uusan ahayn mid kali ah.
Halkan waxaa ah xiriiriye qoraal kale oo ku saabsan nooca serif-ka ugu isticmaalka badan. Waxaan rajeynayaa in maqaalkani uu kaa caawiyay inaad wax badan ka barato xarfaha serif, qaabkooda, iyo goorta aad garanayso sida loo isticmaalo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Waa maxay nooca serif iyo goorma ayaa la isticmaalaa?
Faa'iido ma leedahay inaad ku iibsato taageerayaasha Instagram?